Masar oo dhex-dhexaadineysa Xamas iyo Israel – Hornafrik Media Network
Dad loo qabtay qarax khasaare geystay oo ka dhacay Laascaanood
Faah-faahino ka soo baxaya Qarax lagu hoobtey oo ka dhacay degmada Jilib
Galmudug iyo Puntland oo ku heshiiyey qodob la xiriira doorashada iyo mid kale
DF oo war kasoo saartay weerarkii lagu soo qaaday magaalada Muqdisho
Masar oo dhex-dhexaadineysa Xamas iyo Israel
By Liibaan Nuur	 On Feb 10, 2020
Wafdi ka socda dowladda Masar oo isku dayaya iney qaboojiyaan colaadda ka taagan marinka Gaza ayaa maanta oo Isniin ah halkaasi gaaray sida uu wakaaladda wararka AFP ay u xaqiijiyeen ilo-wareed ka tirsan Waaxda Amaanka ee ururka Xamas.
Socdaalka wafdigan ayaa imanaya kadib markii Israel ay mar kale duqeysay magaalada Gaza taasi oo ay kaga jawaabaysay gantaalo halkaasi looga soo tuuray.
Masar ayaa in muddo ahba ahayd dhexdhexaadiyaha Israel iyo ururka Xamas oo gacanta ku haya maamulka marinka Gaza laakin waxaan faahfaahin laga bixin booqashadan ay wafdiga Masar maanta ku tageen Gaza.
Ciidamada Israel ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in saacadihii hore ee maanta ay diyaaradahoodu beegsadeen goobo ay leedahay Xamas oo ku yaalla koonfurta marinka Gaza.
Waxa ay sheegeen in goobaha la weeraray ay ku jirto xerada tababarka iyo kaabayaal militari oo ay leedahay Xamas.
Ma jiro wax war ah oo ku saabsan haddii ay jirto cid duqeymahan waxyeelo ka soo gaartay ama dhismayaal ku burburay.
Habeenkii Axadda ayaa gantaalo laga soo ganay Gaza waxaa lagu garaacay koonfurta Israel, taasi oo keentay in qalabka ka diga gantaalaha ay qeyliyaan islamarkaana kumanaan dad ah ku qasabtay iney aadaan goobaha looga dhuunto banbaanooyinka.
Dadka Shiinaha oo ku laabtay shaqooyinka kadib fasaxii Coronavirus
Lafta-gareen oo magacaabay guddiga farsamada soo xulidda baarlamaanka labaad